Hasiana Fanamboarana Ny Sandam-bola Zambiana · Global Voices teny Malagasy
Hasiana Fanamboarana Ny Sandam-bola Zambiana
Voadika ny 18 Novambra 2012 21:53 GMT
Vonona hanavao ny sandam-bolany amin’ny alalan’ny fanesorana ireo aotra telo amin’ny Kwacha i Zambia amin’ny taom-baovao.
Nanan-danja teo amin'ireo mpampiasa aterineto ilay tetikasa goavana izay nanoloran'ny Bankin'i Zambia mihitsy ny andro 31 Desambra 2012 ho andro tsy fiasàna mba hamelàna ny fikisahana moramora avy amin'ny vola ampiasaina amin'izao fotoana mankany amin'ireo vola taratasy sy vola madinika navaozina, izay averina hampidirina ihany koa.
Ireo vola Zambiana Kwacha navaozina New rebased Zambian Kwacha izay hampiharina manomboka amin'ny Taom-baovao. Sary nalaina teo ambany famelan'ny Zambian Watchdog.
Nafana ny adihevitra tao anatin’ny bilaogy Zambia Economist (Mpahay toe-karena Zambiana) izay nisian’olona maro na mpomba na mpanohitra izany fampiharana izany. Nanoratra ny mpandray anjara tsy nitonona anarana iray:
Mihamazava ny vidin’ny fanavaozana ny Kwacha amin’ny raharaham-barotra. Saro-tsapain-tanana hatrany ny tombony […] Nambaran’ny Standard Chartered Bank Plc tamin’ny voalohandohan’ny volana Oktobra fa ny fanavaozana dia mitentina 5 lavitrisa Kwacha [tokony ho 1 tapitrisa dolara Amerikana] raha resaka fanavaozana rafitra sy fotodrafitrasa. Ny ampahany amin’io vola io dia mankany amin’ny fanofanana ny mpiasa mba hampisosa ny fifindrana makany amin’ilay kwacha vaovao. Ny National Savings sy ny Credit Bank (NATSAVE) (Tahiry Nasionaly sy Banky Mpampindram-bola) no naneho tamin’ny faramparan’ny volana Oktobra fa hatreto dia 1 lavitrisa kwacha no lany tamin'ny fikarakarana voalohany ny fanavaozana ny sandan'ny Kwacha. Nentina namerenana nanamboatra ny sehatra IT sy ny fitaovana ankapobeny anaovana ny famerenana ilay sandany tanatin'ireo sampany 27 manerana ny firenena izany vola izany.
Nitsikera bebe kokoa mikasika io hetsiky ny governemanta io ilay mpandray anjara:
Mampalahelo ny mieritreritra fa fanapahan-kevitra politika rano fotsiny izany. Tsy misy fanaraha-maso ny resaka toe-karena mba nataon’ny GRZ mihitsy! Mazava ho azy fa noho ny “fahatokisana anjambany” ataon’ireo Zambiana tsotra manoloana ny fahaizan’ny governemanta mandinika avy amin’ny alalan’ny zava-misy. Maro ireo Zambiana izay mifaly fotsiny amin’ny filazàna hoe, “Nandinika lalina an’io ny governemanta, noho izany dia marina ny heviny “. 2012 isika izao, mahatohina ny mandray toerana izay tsy hay hazavaina raha tsy avy amin'ireo dona ara-tsainan'ny lova navelan'ny fanjanahantany.
Nanondro izay hizaka ny vokatr'io fanavaozana io any am-para ny tsikera teo ambanin’ilay bilaogy :
Tsotra be mihitsy. mandany iray miliara aho ho vidin’ny fanavaozana ny sandam-bola kwacha,tsy maintsy hitady vahaolana aho hamerenana ny vola lany ary mazava ho azy fa tsy maintsy mitady làlana hamindràna ny fandaniako ho any amin'ny mpanjifa aho “””??Inona??noheverinao fa handany izany rehetra izany maimaim-poana aho?Tsy misy dikany ara-barotra izany …….
Namaly io bilaogy voalaza etsy ambony io tanatinà lahatsoratra iray hafa i Francis Ilunga, nandiso ny hevitr’ilay mpanoratra tsy mitonona anarana ary milaza fa mpiasan'ny Bankin'i Zambia izy taloha saingy manoratra ho azy manokana ankehitriny:
[…] Na izany aza dia adinon'ilay mpanoratra ny nanonona ireo masom-bola ilain'ny ankabeazan'ireo mpanao raharaham-barotra amin'ny fanamboarana/ fanovàna ny endrik'ireo tolotra mahazatra (fitantanam-bola/fitsirihana, sns), izay azon'izy ireo rehefa mandeha eny ny fotoana. Hankafizinareo ny fanamboarana ireo tolotra nampiasaina any Zambia tany amin'ireo fari-piadidiam-pitsarana izay fara-fahabetsany dia aman-tapitrisany ireo sadam-bola. Ny zava-misy ankehitriny ao Zambia, izay hilàn'ireo fikambanana sasany, indrindra ireo banky manan-tahiry Kwacha an-davitrisa na ‘trillion’ , fanovàna ny endrik'ireo tolotra mba hanaparitahana ireo toerana firaketana, izay mihalafo dia lafo tokoa. Miaraka amin'ny fanavaozana ny Kwacha, tsy handany vola intsony amin'ny fanamboarana/ fanovàna ny endrik'ireo tolotra vaovao vao azo ny fandraharahana.
Nanome ny fomba fijery ara-tantara mikasika io fanapahan-kevitra hanova ny Kwacha io ihany koa Ilunga, izay manoratra ,hoe:
[…] Novolavolaina tamin'ny 2003 io hevitra hanova ny Kwacha io, nefa tsy afaka nampiharina noho ny tsy famelan'ireo fototra ‘macro'ekonomika nisy tamin'izany fotoana. Ohatra, midika fiverenana amin'ireo fanomezana lanja ambony ao anatinà fotoana fohy ny fampakàrana ambony be ny vidim-piainana, tahaka ilay tranga niseho tany Zimbaboe. Tato anatin'ny fotoana vitsy lasa, nidina izany fidanganana maharitra izany ary nilatsaka ho isa iray sisa. Ity fidinan'ny vidim-piainana ity, miaraka amin'ireo fepetra ‘macro'ekonomika, dia nanome ny fotoana mety ho fanavaozana ny sandam-bola Zambiana. Araka izany, tsy misy idirany amin'ny politika araka ny nambaran'ilay mpanoratra ny fanavaozana ny Kwacha.
Ho faly ianao hanamarika fa lasa kely avokoa sy nakarina ireo aotra 3 amin'ireo vola (miloko mena) K50000 , K20000 , K10000 , K5000 , K1000, any tsotra ny anton'izany, tao an-tsain'ny BOZ ny hanala ireo aotra kely niakatra ireo tamin'ny fotoana mety, ary ankehitriny izany fotoana izany.
Mitsikera ny bilaogin'Ilunga ny mpandray anjara iray tsy nitonona anarana , ary nanoratra:
arahabaina, tena mpahay toekarena tokoa ianao, mila fampahalalana faingana tahaka izany izahay mba tsy hahatonga ny olona hino fa fampiharana akademika [sic] & mandany vola fotsiny natao hanomezana tombotsoa olom-bitsy sy ny andrim-panjakana ny fanavaozana ny Kwacha.
Nanakiana mafy ireo fanovàna ireo ho toy fikarakaran'endrika ivelany ny mpamaky iray tao amin'ny vohikala Lusaka Times, Enka Rasha:
Mety nahavita toeram-pianarana vitsivitsy ny vola lany tamin'ity fikarakarana ivelany ny kwacha ity. Manakalo dollar 1 amin'ny 20.000 ireo firenena tahaka an'i Vietnam, 1 amin'ny 7000 kosa i Bolivia ary ny 1 dollar Amerikana =25000 pesos Kiobana nefa tsy maika hanavao endrika tahaka an'i Zambia ireo firenena ireo. Hatsarao aloha ny toekarena miaraka amin'ireo vola miditra sy fari-piainana tsara alohan'ny ihazakazahanao mankany amin'ireo fanovàna endrika.
Miandry ny fampiharana ireo sandam-bola vaovao ireo ny Zambiana, izay fotoana vitsy monja satria efa nitondra ilay volavolan-dalàna tany amin'ny parlemanta ny governemanta.
2 herinandro izayMadagasikara
Mozambika: Nodidiana noho ny fivontosan'ny atidohany ilay mpihira rap Azagaia
Janoary 2021 43 Lahatsoratra